रोजगारी : स्वदेशमा कि विदेशमा | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय रोजगारी : स्वदेशमा कि विदेशमा
on: १३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:२५ सम्पादकीय
जापानलाई श्रमिक आपूर्ति गर्न गरेको सम्झौतालाई नेपाल सरकारले ठूलो सफलताका रूपमा लिएको छ । नेपालमै रोजगारी सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान निरुत्साहित गर्ने भनेर सरकारले दाबी गरे पनि आन्तरिक रोजगारी सृजना गरेको सकारात्मक समाचार आएको छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न भने एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै छ । यसले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ : सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने हो कि वैदेशिक रोजगारी ?
रोजगारीको समस्याले नेपालको समग्र आर्थिक प्रणालीमै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । कानूनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, सरकारी कार्यशैली, वित्तीय प्रणाली इत्यादिभित्र समस्या गुजुल्टिएर बसेका छन् ।
आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी श्रमिकले स्वदेशमै काम गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, नेपालमै बसेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा देशमै रोजगारी सृजना गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको थियो । तर, न सरकारले यसका लागि उल्लेख्य काम गर्‍यो न त युवामा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण नै कम भयो । एक त नेपालमा राम्रो रोजगारी छैन । अर्को भएकै रोजगारीमा पनि राम्रो तलब छैन । विदेशमा काम गर्नुलाई गौरवका रूपमा लिने सोच पनि हाबी छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । कोरियाली भाषा परीक्षणको परीक्षाको आवेदन दिन लाम लागेको युवाको लर्कोबाट यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ । विकसित देशहरूमा श्रमशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । त्यसैले मेशिनले गर्नेबाहेकका अन्य काममा नेपालीहरूले काम पाउने देखिन्छ । यसरी विदेशमा काम गर्न जाने आकर्षण बढाएर नेपालले कस्तो समाज र देश बनाउँदै छ ?
नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । पाइए पनि पुरानो छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसबारे गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बा“की छ । त्यो प्रतिवेदनपछि यसको अवस्था केही स्पष्ट हुनेछ । तर, एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट छ : नेपालमा रोजगारीका राम्रा अवसर छैनन् । रोजगारीका बारेमा सरकारको प्राथमिकता अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । एकातिर कृषियोग्य जमीन बाँझो राखे कारबाही गर्ने नीति लिन्छ भने अर्कातिर युवालाई भटाभट विदेश पठाउन सम्झौता गर्छ । स्थिर सरकार आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण कम हुन्छ भन्ने विश्वास थियो तर स्थिति उल्टो छ । सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि ठोस उपलब्धि प्राप्त गरेको छैन भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सहजीकरण गर्न भने धेरै नै कामहरू गरेको पाइन्छ । यसरी सरकार आफै युवा श्रमशक्तिलाई विदेश पठाउन कम्मर कसेर लाग्नु राष्ट्रका लागि निकै विडम्बना हो ।
सरकारले केही पनि नगरेको भने होइन, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, निश्चित अवधिका लागि रोजगारी दिन नसके जीवन निर्वाह भत्ता र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा काम भएका छन् । तर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षणमा कत्ति कमी आएको छैन । यसले स्पष्ट हुन्छ, रोजगारीका सम्बन्धमा देखिएको समस्याको भित्री पाटो अर्कै र विशेष छ । त्यो के हो पत्ता नलगाई समाधान सहज खिँदैन ।
रोजगारीको समस्याले नेपालको समग्र आर्थिक प्रणालीमै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । कानूनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, सरकारी कार्यशैली, वित्तीय प्रणाली इत्यादिभित्र समस्या गुजुल्टिएर बसेका छन् । यसलाई नसल्टाएसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन कठिन छ । तर, सरकार भने समाजवादको रंगीन सपनाभित्र टालटुले नीतिमै रमाइरहेको छ । सरकारको एकल निर्णयभन्दा पनि निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक संवाद गरी दूरगामी नीति तय गरिनुपर्छ, प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
भ्रमण वर्षबाट दश लाख रोजगारी, आय दोब्बर !
२ बैशाख २०७६, सोमबार ०६:०३
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार ०७:३२